Iqhwa nesihluku, kodwa umhlaba izihambi, ongenakulibaleka nobusuku obungamashumi emhlophe - konke lokhu balindelwe ngawe Yakutsk - dolobha, eyingqayizivele kanye original, captivates wonke umuntu okungenani kanye wavakashela lapha. amapaki amahle olunothile ubunjalo Yakutia kuyogxilisa yimuphi fan of imisebenzi yangaphandle, akukho umuntu okhetha bashaywe umoya onokuthula.
Yakutsk: nokuzwa, umlando
Eyokuqala kukhulunywa khona edolobheni basonta 1632. Lapha Yakutsk Fort yakhelwa ukuzivikela izihlubuki. Kwakuwusuku Russian lokuqala zokuhlala lempi ku ezweni yakut, Kamuva lahlangana ezweni laseSiberia angomakhelwane. Sekuphele iminyaka eyishumi, i-Yakuts ehlaselwa Fort izikhathi eziningana, kodwa ngaso sonke isikhathi elinde kunqotshwa kwazo. Ngaleso sikhathi kwakunabamemezeli Emayunithi lamasha indawo, futhi ejele elaba isikhungo Yakutsk County. Isimo sabo enkabeni yedolobha bakhangisa igama layo lamanje Yakutsk etholwe 1643.
Kuze kube 1900 wayengumuntu ingxenye yesifundazwe laseSiberia ke esiFundazweni sase-Irkutsk, izikhathi eziningana ezashintsha isimo salo edolobheni wesifunda esikhungweni lesifunda. Futhi kuphela ngonyaka ka-1922 kube yaqashelwa ngokomthetho njengezwe inhloko-dolobha yakut Republic.
Lokhu edolobheni elisenyakatho muhle. Yakutsk Izimpawu zokubekisa zase incazelo kungatholakala ezikulezi zincwajana izinkampani eziningi zokuhamba. A nomlando omude ezithakazelisayo kubonakala izikhumbuzo zalo eziningi, lapho izakhamuzi banomusa. Ake ukubazi nabanye babo.
Architectural futhi Historical Museum "Ubungane"
Yakutsk, lapho izinto Zisabangela ukukhathazeka phakathi ososayensi nabacwaningi abaningi abanesithakazelo kanye nezivakashi abavamile.
"Ubungane" Museum itholakala ku-ibhange kwesokudla ngokubabazekayo Yelena River, lapho abahloli bamazwe Russian eyasungulwa Lensky Lase-Ostrog, okuyinto wasungula idolobha. Namuhla kuba izivakashi ezinkulu isikhungo yamasiko Yakutsk.
Museum kwavulwa ngo-1990 okuqala. Umholi wayo kwaba abadumile umbhali Folk yakut - Suorun Omolloon.
Zonke izivakashi Museum abaqeqeshiwe abasebenzi sipho bajwayelane umlando asize ngokuhlanganisa Russia kanye Yakutia, ukuhlola umthelela okuqhubekayo isiko Russian ku isiko abakhileyo zomdabu weRiphabhulikhi.
Esikhathini Museum ungathola lokujwayela isiko Evenki, amaChukchi nama Dolgan Yukagirs. Sinesithakazelo ngokukhethekile izivakashi ingubo kazwelonke ezizwe yasenyakatho setfulo XIX-XX eminyaka, izinto kumysnyh sokhuni, imigexo zabesifazane, yasendulo izakhiwo ecabangela ukungcwatshwa kwami.
Ngu izinto eziyingqayizivele Museum-reserve kuzomele sifake yakut emathuneni lapho ukusungulwa ngokulandelana ukuze lokhuni ezikhumbuzo abonisa inqubo yobuKristu we Yakuts.
Ingqopha Yakutsk, ngakho yokuqala, ukuthi abaningi babo bangabantu eyingqayizivele emhlabeni. Isibonelo salokhu - Museum eziyingqayizivele Mammoth. Ezweni azikho izikhungo ezifana, okuyinto ngokukhethekile futhi ufunde ziphephile kwezazi.
It yasungulwa ngo-1991 waba isikhungo angokwesayensi nolwazi, iye ukutadisha mammoth futhi ukuphila kwabo ekuphishekeleni Ice Age. Omula kuqala dalo lokhu Museum kwaba mamontolog wokuqala kusukela Yakutia Petr Alekseevich Lazarev.
Esikhathini yembathani Yakutia ngesikhathi kumbiwa, abavubukuli baye bathola ukutholakala emangalisayo - mammoth, emhumeni amabhubesi, inyathi, mammoth ubhejane, must inkabi nezinye izilwane eside yokuqothulwa. Ngaphambi kuvulwa Museum ukwaziswa okusanda esingenantengo bathunyelwa izikhungo ephakathi ye emadolobheni amakhulu akuleli zwe. Ukuvela Museum of mammoth kungenzeka ukuba afeze zonke izifundo bese ebashiya in Yakutsk.
Ngo-July 1998, umnyuziyamu baba ingxenye Institute of Applied Lemvelo laseNyakatho. Futhi ngo-2011 kwaba khona ukwahlukana we North-Eastern Federal University.
Ngezinye zezitsha eziningi, phakathi okutholakele eziningi ezithakazelisayo, singabona ingane mammoth Dima (Nokho kungcono nje ikhophi), okuyinto atholakala ngo-1977 lifinyelela engenhla River Kolyma. Namuhla uyisikhonzi enhloko-dolobha enyakatho. Phakathi nenkathi emfushane Museum uqukethe iqoqo elikhulu, kwezigidi 1.450 ziphephile.
izivakashi eziningi eza Yakutsk, ezikhangayo aqale afunde kulokhu laboratory ngomshoshaphansi. It kungokwalabo Isikhungo eyiqhwa. Namuhla-ke ingenye kumasayithi athandwayo kakhulu emzini.
Ilabhorethri yasungulwa ngo-1961 i-Ucwaningo olunzulu eyiqhwa. Ukuze ucwaningo endaweni yokucwaninga komhlaba, kudingeka lokushisa ezimbi. Ngakho-ke, igalari aphansi elele ezingeni zero amplitude lokushisa umhlabathi ngqo ngaphansi esakhiweni Institute of eyiqhwa. I ephansi igalari unyaka wonke lokushisa EsiZulwini asinayo: -5 ...- 4 ° C, umswakama - 70% kuya ku-100%.
Yakutsk, ezikhangayo okuyinto mangaza ngisho abahambi ebona, ezidumile emhlabeni wonke eziningana imisebenzi eyisisekelo ephathelene ekutadisheni izakhiwo mechanical ice, inhlabathi ungangena eyiqhwa. Namuhla, le miphumela izifundo ziye zasetshenziswa ngempumelelo ukuklanywa nokwakhiwa kwezakhiwo ahlukahlukene, izakhiwo zezimboni kanye yokuhlala, imigwaqo kanye namapayipi.
izivakashi eziningi ezifika e Yakutsk ezihehayo balinde ukubona ukuthi yini oyithandayo, kodwa "Ortho-Doydu" Zoo khona kwabaningi kuba ezingalindelekile. Kuyinto somphakathi weRiphabhulikhi Sakha. Lesi siqiwu isendaweni loMfula uLena, endaweni olunothile - Erkeeni Valley.
igama Ipaki lihunyushwe kwelesiHeberu elithi ngolimi yakut kusho "emhlabeni phakathi '. Iqiniso liwukuthi yakut izinganekwane ukuhlukanisa imihlaba emithathu - elingenhla, maphakathi kanye aphansi. Abas (zilwane) baphile emhlabeni ephansi, ngokwesilinganiso - abantu nezilwane, futhi ubeke eceleni onkulunkulu eliphakeme. Ngakho zoo Yakutsk futhi umelela izwe phakathi.
Ipaki "Ortho-Doydu" wavula ngo 2001. Kuyinto zoo kuphela emhlabeni, ezisebenza ezindaweni kakhulu enyakatho. engavamile yayo itholakala iqiniso ukuthi kungathatha iyiphi izilwane zasendle futhi ubasize.
Okwamanje, zoo izici 170 zezilwane abahlala ezindaweni ezahlukene womhlaba. Imiphumela Lapha omuhle ezindabeni yokuzalanisa lynx yase-East laseSiberia Arctic impisi kanye impungushe. Ngaphezu kwalokho, kuveza izindawo exotic lezi izinhlobo zezilwane nezinyoni - ihlosi lase-Amur, must inkabi, ukhozi, sonwele grouse Asian, nezimagqabhagqabha izinyamazane, ama-beaver afeza, ukhozi elimhlophe-tailed, nefukezi nabancane, njll ...
Yakutsk, ezikhangayo -: abahambi Izibuyekezo
bayilibale izivakashi kulo edolobheni elisenyakatho. Magnificent imvelo enyakatho, isimo sezulu elibuhlungu kuthinta Yakutsk. Okubonwayo komuzi injabulo. Amagama amaningi efudumele uyalunga abasebenzi Museum, abachitha uhambo ethakazelisa kakhulu.
Lipstick Olubomvu brunettes, blondes nezinye tsvetotip. Shades of lipstick red: Indlela ukukhetha kwakho?